Dowladda Mareykanka oo qorshaynaysa in ay isbadal ku samayso sharciga hubka - BBC News Somali
Dowladda Mareykanka oo qorshaynaysa in ay isbadal ku samayso sharciga hubka
Image caption Jeff Sessions (Midig)
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka, Jeff Sessions, ayaa ku dhawaaqay qorsha wax looga badalayo shuruucda hubka iyo in si rasmi ah loo mamnuuco qalabka lagu rakibo qoryaha taasi oo suuragal ka dhigaysa in uu si darandoori ah u dhaco.
Aaladan ayaa waxaa loo isticmaalay bishii October toogashadii ka dhacday hotel ku yaalla Las Vegas, halkaasi oo 58 qof ay ku dhinteen
Mr Sessions ayaa sheegay in tillaabadani ay tahay mid muhim ah si loo yareeyo rabshadaha ka dhasha hubka.
Doodda ku saabsan qalabkani qoryaha lagu rakibo si ay darandoori ugu dhacaan ayaa soo cusboonaatay ka dib markii toogashadii ka dhacday Las Vegas la sheegay in ninkii fuliyay uu aaladaasi isticmaalay.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka, Jeff Sessions, ayaa sheegay in qalab ay tahay in lagu daro in ay qayb ka yahay hubka darandooriga u dhaca.
Hubka darandooriga u dhaca ayaa laga mamnucay in dadka rayidka ah ay qaataan dalka Mareykanka.
Qalabkani looma isticmaalin toogashadii ka dhacday iskuul ku yaalla gobolka , balse weerarka ka dib ayaa madaxwayne Trump waxa uu waaxda cadaaladda ugu baaqay in ay tillaabo ak qaadaan qalabkani lagu rakibo qoryha ee ka dhigaya kuwa si darandoori ah u dhaca.
Tillaabadni ayaa ku soo beegmaysa xilli maanta lagu wado in boqolaal kun oo qof ay dhigaan dibad bax guud ahaan Mareykanka taasi oo ay ku dalbanayaan in la soo saaro tillaabooyiin adag oo hubka lagu xakamaynayo.